Iindaba - Ukwakhiwa kwegesi yendalo
Ukuqulunqwa kwegesi yendalo
I-oyile ekrwada kunye nerhasi yendalo zizonke zibizwa ngokuba yioyile. I-oyile ekrwada lilungu lehydrocarbon elinzima ngokwentelekiso elenziwe ngokwendalo likwimo yolwelo, ngelixa irhasi yendalo ilicandelo lehydrocarbon ekhaphukhaphu ekhoyo kwimo yegesi. Irhasi yendalo esuka kumthombo werhasi ibizwa ngokuba yirhasi yequla, kwaye irhasi yendalo eyahlulwe kwioyile ekrwada kwiqula le-oyile ibizwa ngokuba yirhasi ehambelanayo.
Irhasi yendalo ngumxube weegesi zehydrocarbon, ekwanamanzi kunye nobunye ukungcola. Ubukhulu becala yenziwe ngekhabhoni, ihydrogen, isulfure, initrogen, ioksijini kunye nezinto ezilandelwayo, ikakhulu ikhabhoni kunye nehydrogen, ene-carbon accounting ye-65% - 80% kunye ne-hydrogen accounting ye-12% -20%. Ukubunjwa kwerhasi yendalo eveliswa kwimimandla eyahlukeneyo kwahlukile, kwaye nokwakheka kwerhasi yendalo eveliswa ngamaqula amabini ahlukeneyo kwindawo enye yahlukile, Ngomgangatho owahlukileyo wokusetyenziswa kwe-oilfield, ukubunjwa kwerhasi yendalo eveliswa liqula elifanayo. kwakhona ukutshintsha.
I-hydrocarbon ephambili kwigesi yendalo yi-methane, kwaye iqulethe i-ethane, i-propane, i-butane, i-pentane, i-hexane encinci, i-heptane kunye nezinye iigesi ezinzima.
Ukuhlelwa kwegesi yendalo
Kukho iindlela ezintathu zokuhlela igesi yendalo
(1) Ngokweempawu zeediphozithi zezimbiwa, ubukhulu becala yahlulwe ibe yirhasi yomthombo werhasi kunye nerhasi ehambelana nayo.
Irhasi enxulumeneyo: ibhekisa kwirhasi yendalo eyahlulwe kwioyile ekrwada ngamaqula eoyile.
Iqula lerhasi: libhekisa kwirhasi yendalo esuka kwiqula lerhasi.
Indlela yeC5 yenkcazo - ulwahlulo lwegesi eyomileyo nemanzi
Irhasi eyomileyo: ibhekisa kwirhasi yendalo enesiqulatho esinzima se-hydrocarbon engamanzi ngaphezulu kwe-C5 (pentane) kunye nokuhlelwa kokwakheka kunye neepropati ezingaphantsi kwe-13.5 cubic centimeter kwi-1 ye-cubic meter eqhelekileyo yegesi yendalo.
Irhasi emanzi: ibhekisa kwirhasi yendalo enomxholo wehydrocarbon engamanzi ngaphezulu kwe-C5 ngaphezulu kwe-13.5 cubic centimeter kwi-1 cubic meter eqhelekileyo yegesi yendalo.
Indlela yenkcazo ye-C3 - ulwahlulo lwerhasi ehluphekayo kunye netyebileyo
Irhasi engenamandla: ibhekisa kwirhasi yendalo enolwelo lwehydrocarbon engaphezulu kwe-C3 engaphantsi kwe-94 cubic centimeter kwi-1 cubic meter eqhelekileyo yegesi yendalo.
Irhasi etyebileyo: ibhekisa kwirhasi yendalo enesiqulatho se-hydrocarbon engamanzi ngaphezulu kwe-C3 ephezulu kune-94 cubic centimeter kwi-1 cubic meter eqhelekileyo yegesi yendalo.
(3) Ngokomxholo wegesi yeasidi, igesi yendalo inokwahlulwa ibe yigesi eneasidi kunye negesi ecocekileyo.
Irhasi emuncu yendalo: ibhekisa kwirhasi yendalo equlethe isixa esikhulu sesulfide, ikharbon diokside kunye nenye irhasi emuncu, ekufuneka icocwe phambi kokuba ifikelele kumgangatho wothutho wemibhobho okanye isalathiso somgangatho werhasi yorhwebo.
Irhasi ecocekileyo: ibhekisa kwirhasi enomxholo omncinci okanye ongekho sulfide, enokuthunyelwa ngaphandle kwaye isetyenziswe ngaphandle kokucocwa.